Fitrandrahana arina, mpamokatra gazy, mpamokatra herinaratra | Wellsure
Ny fanoloranay ny arina, ny baomba, ny fahombiazan'ny andian-tsarimihetsika.
Omeo vahaolana manontolo
Wellsure dia mifantoka amin'ny vahaolana iray manontolo manome fa tsy ny famokarana fotsiny izay manambatra ny endrika, ny famokarana, ny varotra ary ny serivisy tokana.
Ny famaritana arina, ny entona, ny vokatra azo avy amin'ny herinaratra
Inona no manaitra ny mpanjifanay.
WST - lafaoro pizza 019
WST - lafaoro pizza 019. Ny vokatra dia avo lenta ary manana fahombiazana azo antoka amin'ny vidin'ny fifaninanana.
WST-005. Mba hiantohana ny kalitaon'ny, ireo mpamatsy akora azy dia efa nosedraina henjana ary ireo mpamatsy izay mahafeno ny fenitra iraisampirenena ihany no voafidy ho mpiara-miasa stratejika maharitra.
Wst-021 lafaoro entona fandoroana dobo / fanavaozana andian-dakozia any ivelany
Wst-021 lafaoro entona fandoroana dobo roa / fanavaozana andian-dakozia any ivelany. Amidy amin'ny firenena sy distrika maro ity vokatra ity.
Lafaoro vita amin'ny grill HS-20200811 / Wst-021 lafaoro mandoro roa
Lafaoro vita amin'ny grill HS-20200811 / Wst-021 lafaoro mandoro roa. Ny vokatra dia manana kalitaon'ny zaitra avo. Ny fantsom-pandrefesana dia hampiasaina hanisana fotsiny ny isan'ny zaitra isaky ny santimetatra isaky ny sanganasa roa farafaharatsiny mba hahazoana antoka fa marina ny zaitra.
Omeo serivisy namboarina.
Raha tsy mahita vokatra efa vonona ho an'ny tetikasa ianao, avelao ny grill arina matihanina an'i Wellsure, ny grill, ny serivisy fanamboarana grills elektrika manampy anao hahazo vokatra tsara ao anatin'ny 7 andro nefa tsy mahafoy fotoana amin'ny tsena na tombony manokana.
Miaraka amin'ny fahaiza-manao sy traikefa mahomby, afaka manome fikarakarana OEM / ODM arakaraka ny hevitry ny mpanjifa na ny fandikana azy izahay. Manana fitantanana mahay koa izahay ary mandalo ny taratasy fanamarinana ISO9001, CE, CSA, noho izany dia matoky izahay fa hanome ny mpanjifanay vokatra tsara sy vahaolana mety. Miarahaba ny mpanjifa rehetra eran'izao tontolo izao izahay.
Tombony ho an'ny serivisy
Raha tsy hitanao ny vokatra vita vonona ho an'ny tetikasa, andao hanome serivisy namboarina manokana mba hanampy anao hahazo ny vokatra tsara ao anatin'ny 7 andro.
Fanadihadiana momba ny vokatra
Ny mpanjifa dia nampahafantatra ny anton'isa takiana ilaina, ny famaritana ny fampisehoana, ny tsingerin'ny fiainana ary ny fepetra takiana amin'ny fanarahana.
Ny ekipa mpamolavola dia tafiditra hatramin'ny nanombohan'ny tetikasa iray hahazoana antoka fa ny vokatra famolavolana namboarina dia mety indrindra amin'ny filan'ny mpanjifa.
Mba hanomezana rafitra avo lenta dia mitazona rafitra fitantanana kalitao mahomby izahay.
Raha vantany vao manamarina ny prototype amin'ny endriny, ny asany ary ny zavatra takiny, ny famokarana no dingana manaraka.
Ny vokatrao dia nahazo mari-pankasitrahana marobe amin'ny lafiny kalitao sy fanavaozana.
Zhongshan Wellsure Metal Products Co., Ltd. naorina tamin'ny 2003, niasa manokana tamin'ny vokatra vita amin'ny aliminioma, fanaka ivelany, grill arintany, grill grills, grill vita amin'ny entona, lakozia ivelan'ny trano, rotissery, mpanamboatra steak sy pizza, grills elektrika, lavaka afo, mpifoka, kamado ary fitaovana BBQ Etc .
Ny orinasan'i Wellsure dia mahatratra 63333 metatra toradroa eo ho eo ny velarany. Manana toeram-pamokarana mandroso sy fitaovana fitiliana feno izahay, ao anatin'izany ny atrikasa misy fanapahana, fametahana, hiondrika, fanangonana, fikolokoloana, fitsaboana ambony ary fahaizan'ny fivorian'ny fiangonana. Manana ekipa injeniera manana traikefa 10 taona mahery hihaona amin'ny takian'ny mpanjifa samihafa izahay. Mifantoka amin'ny vahaolana iray manontolo izahay, tsy ny famokarana ihany fa ny fampifangaroana ny endrika, ny famokarana, ny varotra ary ny serivisy tokana.
Miaraka amin'ny fahaiza-manao sy traikefa mahomby, afaka manome fanodinana OEM / ODM arakaraka ny hevitry ny mpanjifa na ny sary izy ireo. Manana fitantanana mahay koa izahay ary mandalo ny taratasy fanamarinana ISO9001, CE, CSA, noho izany dia matoky izahay fa afaka manome ny mpanjifanay vokatra tsara sy vahaolana mety.
Ny henan-tsaribary, fanendahana entona, vokatra azo avy amin'ny herinaratra dia aondrana any Etazonia, Aostralia, Eropa ary Afrika Atsimo. Miarahaba ny mpanjifa rehetra eran'izao tontolo izao izahay.
17 taona +
Ekipa injeniera efa za-draharaha mihoatra ny 17 taona.
Kalitao azo antoka hihaonana amin'ireo mpanjifantsika.
Oven infrareda WST-011
Lafaoro infrared WST-011
Avelao fotsiny ny mailakao na ny nomeraon-telefaonanao ao amin'ny taratasy fifandraisana mba hahafahanay mandefa teny maimaimpoana ho anao ho an'ny volavolanay maro!